Soo -saaraha iyo bixiyeyaasha Shiinaha GUULEYSTA
Ku soo dhowow guulaha!
Ku rakibida Awoodda Copper
Substation -ka is haysta
Danab Danab oo Danab
Danab Sare Danab
Beddelka Furaha Xamuulka
Jebiyaha wareegga golaha wasiirrada ee la buufin karo (oo gooni -gooni ah aan lahayn dhulka)
Qaybta alaabta ： Taxanaha golaha buufin
Horudhac ： Jebinta wareegan waxaa inta badan loo adeegsadaa armaajooyinka la buufin karo. Badeecadu waxay qaadataa qaab dhismeed. Waxay leedahay faa'iidooyinka rakibidda fudud oo ku habboon, waxqabadka jebinta lagu kalsoonaan karo, nolosha adeegga dheer, iyo dayactir la'aanta.
SHARAXA SOO SAARKA
Jebinta wareegan waxaa inta badan loo adeegsadaa armaajooyinka la buufin karo. Badeecadu waxay qaadataa qaab-dhismeed alwaax.lt wuxuu leeyahay faa'iidooyinka rakibidda fudud oo habboon, waxqabadka jebinta lagu kalsoonaan karo, nolosha muddada dheer, iyo dayactir la'aanta. Waa beddelka ugu habboon jebiyayaasha wareegga faaruqinta ee loo yaqaan 'inflatablecabinets'.
2014 "AC Voltage Circuit Breaker" E2-M2-C2 shuruudaha jebinta wareegga fasalka.
TILMAAMAHA LOO ISTICMAALO XAALADAHA DEEGAANKA
1. Jooggu ma dhaafo 2000m, xooga dhulgariirkuna kama badna 8 °.
2. Heerkulka hawadu wuxuu ka hooseeyaa +50 ℃ oo aan ka hooseyn -45 ℃ .Qiyaasta heerkulka celceliska maalinlaha ah kama badna 95% celceliska bil walbana kama badna 90%.
3.In la rakibo meelaha leh gariir aad u daran oo soo noqnoqda, uumiga biyaha, gaaska, kaydka kiimikada ee kiimikada, buufinta milixda, boodhka iyo wasakhda, iyo dabka, taas oo sida muuqata saamaynaysa waxqabadka farsamada, kuma habboona meelaha lagu rakibo khataraha qaraxyada.
4. Cadaadiska gaaska SF6 ee la qiimeeyay: 0.04MPa, gaaska SF6 wuxuu buuxiyey shuruudaha GB/T12022-2014 "Industrialsulfur hexafluoride".
Maya. Shayga Cutub Xog
1 Danab la qiimeeyay Kv 12/24
2 Joogtaynta La Qiimeeyay Hz 50
3 Hadda la qiimeeyay A 630
4 Waqtiga Gaaban ee La Qiimeeyay Ka Hortagga Hadda KA 20/25
5 Qiimeynta ugu sarreysa ee hadda taagan KA 50
6 Muddada Wareegga Gaaban ee La Qiimeeyay s 4
7 Wareegga Gaaban ee La Sameeyay Hadda KA 50
8 Waqtiga Hawlgalka Waqtiyada 10000
9 1 m awoodda soo noqnoqoshada korantada Kv 38
Hore: Beddelka Tayada Wanaagsan - Nooca sanduuqa XGN15-12 ee biraha AC ee ku xiran biraha - WINS
Xiga: xiriirka busbar
Rmu Vacuum Circuit Breaker
fiilada naxaasta ah ee isku xirta kabka naxaasta lugs crimp ...
MNS kabadhka korantada ee korontada lagala soo baxo
Nooca sanduuqa XGN15-12 ee biraha AC ku xiran switc ...
KYN28A-12 Gawaarida gaashaaman ee la xiran karo ee xiran
usha tabinta naxaasta ah
Mashiinka CNC, been abuurka, foorarsiga, naxaasta shaabadaysan ...
Tuulada Wujia, Magaalada Chumen, Magaalada Yuhuan, Gobolka Zhejiang, Shiinaha